लाइफ चेन्जिङ: पन्ध्र सयले डोर्याएको करोडौंको यात्रा - Everest Talk
लाइफ चेन्जिङ: पन्ध्र सयले डोर्याएको करोडौंको यात्रा1 min read
जन्म र मृत्युलाई किनार बनाएर बीचमा एउटा नदी बग्छ, त्यो जीवन हो ।
२०७६, १६ मंसिर सोमबार ०८:४७
in एभरेष्ट टक विशेष, लाइफ चेन्जिङ्
‘‘गरिब भएर जन्मनु गल्ती होइन तर गरिब भएरै मर्नुचाहिँ गल्ती हो ।’’– बिल गेट्स
गरिब हुनु वा धनी हुनुले जन्मसँग उत्ति सरोकार राख्दैन्, जति मृत्युसँग राख्छ । मान्छे जन्मन्छ, तर आफ्नो जन्मप्रति उसको भूमिका रहँदैन, नियन्त्रण रहँदैन । नियन्त्रण त मृत्युको पनि कसैले गर्न सकेको छैन । तर, तपाईँले जन्मपछि बिताएको एउटा कालखण्ड जीवन बन्छ र उक्त कालखण्डमा गरिएको यात्राले भने मृत्युसँग अवश्य सम्बन्ध राख्छ ।
जन्म र मृत्युलाई किनार बनाएर बीचमा एउटा नदी बग्छ, त्यो जीवन हो । यात्रा उही हो, सागरसम्म । तर, सागर पुग्नुअघिको जुन सफर रहन्छ, त्यसले मृत्युसँग सम्बन्ध राख्छ । मृत्यु भन्नु नै जीवनहरूको महासागर हो, त्यो महासागरसम्म तपाईँ कसरी पुग्नुहुन्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
नदी सधैँ आफू भएर मिसिँदैन सागरमा । धेरै अरूमा समाहीत भए, आश्रित भएर चुम्छन् सागरको छाती । कसैको यात्रा अरूमा निहीत भइदिन्छ, जसरी तमोर बग्छ कोशिमा समाहीत भएर । आफू रहन नसक्नु भनेको आफैँलाई गुमाउनु पनि हो । र, संसारको सबैभन्दा ठूलो धन आफैँलाई कमाउन सक्नु नै हो । त्यस्तै जीवनमा आफैँलाई कमाउन सफल वा आफैँलाई कमाउनउन्मुख नाम हो लोकेश ओली ।
एउटा टीनको बाक्सा, बाक्साभित्र केही जोड जोडी नमिलेका कपडा, केही थान गाता भएका नभएका किताबकापी अनि पकेटमा एक हजारका खुजुरा । र, एउटा साइकलको साथमा स्वर्णीम सपना सजाएर सहर छिरेका थिए लोकेश । लोकश अर्थात् ओलिज् स्टोरका मालिक ‘लोकेश ओली’ । उनी आफ्नो सपना र साइकलको सम्झनालाई ताजा बनाउँदै भन्छन्, ‘‘साइकल नि गज्जबकै थियो । काठमाडौँमा त साइड लाइट दिनुपर्छ भन्ने मलाई ज्ञान भएकोले पनि होला उक्त साइकलमा साइड लाइट जडान गरिओरी ल्याएको थिएँ । त्यो बेलाको मेरो एउटा ठूलो खुसी र सहरको सपना नै त्यही साइकलमा अडेको थियो । तर अफसोच्, केही दिनमै साइकलसँगै मेरा केही सपनाहरू पनि चोरी भए ।’’
लोकेशका दाइ चेतन केही वर्षअघि देखि नै सहरमा बस्दै आएका थिए । दाइ हुनु भनेको केही नहुँदा पनि धेरैथोक हुनु हो । उनलाई यो सहर नै दाइको जस्तै लाग्यो । अब दाइ भएपछि उनलाई कसको पो डर ? एउटा भाडाको कोठा छँदै थियो, कोठामा विजुली, भाँडाकुँडा, आफैँ झापाबाट भारी लगाई ल्याएको आलु र मुसुली धानको चामल । खान बस्नको के समस्या ? दाइ भनेको आफैँमा धेरै समस्याको समाधान हो भाइका लागि ।
दाइको लागि पनि यो अन्जान सहरमा कोही नहुँदा भाइ हुनुभनेको सबैथोक हुनुजस्तो हो । भाइ दाइको लागि भरोसा पनि त हो नि ! भाइ रुममा भएसी दाइको दिनभरको थकाई आफैँ आधा हुन्छ ।
‘‘घरको चामल र आलुको भर थियो । नत्र कहाँ सकिन्थ्यो होला र यो सहरमा बस्न ? बुवाले महिनाको १५०० पढाइदिनुहुन्थ्यो । रु. ३०० कोठाको भाडा । त्यही बाँचेको पैसा बचाउँदा बचाउँदै सकिन्थ्यो महिना पनि ।’’ लोकेश सम्झन्छन्, ‘‘संयोग, मेरो पहिलो जागिर पनि उही १५०० को नै थियो ।’’
लोकेशको पहिलो जागिर थियो रे पर्दाको मार्केटिङ् । उही पर्दा जुन हामी झ्यालमा लाउँछौँ । मार्केटिङ पनि कस्तो गज्जबको ? झोलाभरि पर्दा भर्ने र हिँड्ने – भारी बोकेर बन्दैगरेका, बनिसक्न लागेका घरहरूपिच्छे । त्योबेलाको मार्केटिङ्, कस्तो काइदा ।
उनमा त्यो १५०० को जागिर खाँदासम्म पनि जीवनमा यसै गर्छु भन्ने कुनै पनि सोच थिएन । तर जब उनले त्यही जागिरबाट महिनाको ३६ हजारसम्म कमिसन निकाल्न थाले तब उनलाई लाग्नथाल्यो कि, ‘मैले त व्यापार पो गर्नुपर्छ ।’ त्यही कमिसनको भरमा उनले केही महिनामै यमाहाको आर.एक्स बहत्तर हजार खर्चेर किने पनि । उनको साइकलसँगै चोरी भएका सपनाहरू फिर्ती भए ।
अहिलेको ओलिजलाई लोकेश आफ्नो १५०० सँगको जागिरसँग जोडेर हेर्छन् र भन्छन्, ‘‘जागिर ओलिज स्टोरको फाउण्डेसन हो, थियो । त्यो जागिर नखाएको भए आज म अर्कै कुनै जागिरमा अल्झेर बसेको पनि हुनुसक्थेँ । आफ्नो क्षमता मैले उही १५०० को जागिरबाट पत्ता लगाएको हुँ ।’’
‘‘मेरा बाहरू सातभाइ । मेरा बाभन्दा बाहेक सबै सरकारका जागिरे, पढेका । मेरो बा कम पढेकै कारण गाउँमा सानोतिनो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो । बुवाकै प्रभाव पनि ममा केही व्यपारिक गुणहरू सरेका रहेछन् । उबेलै पनि म घरमा फलेको आँप र बडहरसमेत लगेर बेचिदिन्थेँ । त्यसको प्रभाव मभित्र गहीरो रहेछ ।’’
लोकेशका लागि उही पन्ध्र सयको जागिर नै अन्तिम बन्यो, जुन पहिलो पनि थियो । कुरो सन् १९९६ तिरको हो, जागिर छोडेर उनले रंगको काम गर्न शुरु गरे ।
रंग मेड इन् जापान SKK (Japanese Texture Coating ) थियो । नेपालमा सिंगापुर हुँदै आउँथ्यो । फेरि आउने पनि लोकेशसँग हैन, अर्कैले ल्याउँथ्यो । उक्त ल्याउनेसँग चाहिँ रकम तिरेर किन्थे उनी । त्योबेला जाप्निज पेन्ट भनेसी रौनकै अर्कै थियो । हिसाब पनि वर्ग मिटरको । दश वर्षको ग्यारेन्टीसहित, एन्टीव्याक्टेरियल पेण्ट । ‘‘अहिले सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर त्योबेला नै यो काम हामीले गरेका थियौँ ।’’ उनी भन्छन् ।
पेन्टिङका लागि दक्ष कामदार चाहिन्थे, आफू पनि कामदार साथै लागिपर्थे, ओलिज् दाजुभाइ । सन् २००४ ताका माओवादीको हल्ला सर्वोच्च बन्यो । त्यही माओवादीको आडमा सहरमा गलत प्रविधिहरूले पनि टाउको चलमलाउन थाले । हिजो गल्तीमा मुन्टो निहुर्याउने कामदार आज नाराजुलुससहित सल्बलाउन थाले । लेभरहरू मालिक बन्न खोजे, आफ्नो गल्ती स्वीकार्न छाडे । जसको कारणस्वरूप उनले उक्त काम नै छोड्नुपर्नेभयो ।
त्यसकै सेरोफेरोबाट लोकेशको यात्राले अर्को मोड लियो । ओलिज् दाजुभाइ पहिलो पटक एप्पलसँग जोडिन पुगे । उनले सन् २००४ मा नै विदेशबाट चारओटा एप्पलका ल्याप्टप झिकाएर डिजाइनको काम शुरु गरे जसलाई ज्योतिश्री नामक कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको थियो । फेलेक्स प्रिन्टको काम पनि शुरु भयो । जुन नेपालीको लागि पहिलो हाइक्वालिटी फ्लेक्स प्रिन्ट थियो रे । लोकेशका अनुसार कति मान्छेहरूले त उक्त प्रिन्टलाई फ्लेक्स प्रिन्टभन्दा नपत्याउनेसम्म हुन्थ्यो ।
त्यसपछि शुरुभो स्टोरको यात्रा । जुन शुरुमै ओलिज् बनेन । त्यससमय उनले होम थिएटरका सामानहरू बेच्ने गर्थे । पछि आएर २०११ देखि उही होम थिएटरका सामान्य सामानहरू बेच्ने स्टोर नै बन्यो – ओलिज् स्टोर ।
ओलिज् स्टोरको नामकरण बुझाउँदै उनी भन्छन्, ‘‘ओली थर त हो, तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा जाँदा ओली नामका अन्य ठूलाठूला कम्पनीहरू पाइयो । हामीलाई छोटो पनि र अन्तराष्ट्रिय बजारलाई सम्झन सहज नाम पनि चाहिएको थियो । विचार गर्दै जाँदा हामी दुई दाजुभाइ, प्लुरल भयौँ । ओलीमा एपस्टोपी एस लाएर उक्त एसलाई उल्टो बनाइदियौँ, लोजिकल्ली त्यो पनि प्लुरल भयो । यसरी ओलिजको जन्म भयो ।’’
एक हजार पैसा, टिनको बाकस र एउटा साइकल साथमा बोकेर सहर पसेको केटो अहिले ओलिज् स्टोरको मालिक होला वा यतिको तरक्र्की गर्ला भनेर अरूले त के उनी आफैँले पनि सोचेका थिएनन् रे ! जिन्दगीमा बाइकसम्म चढ्ने सोच भने उनको सानैबाटको भएको उनी बताउँछन् । तर अहिले तिनै काठमाडौँमा एकअर्काको भर परेर कोठा बस्ने ओलिज् दाजुभाइ वार्षिक पचास करोडदेखि एक अर्बसम्मको कारोबार गर्ने ल्याकत राख्ने कुरा बताउँछन् – लोकेशका दाइ चेतन । दाइ चेतनले अहिले पनि ज्योतिश्री नामक कम्पनीलाई समालेका छन्, जसले अहिले पनि प्रिन्टिङ्कै काम गर्छ ।
लोकेश कर्ममा विश्वास गर्छन् । उनी निरन्तरतालाई जीवनप्रतिको अनुशासन ठान्छन् । भन्छन् – ‘यदि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर कार्यरत रहनुहुन्छ भने रोक्नसक्दैन तपाईँलाई कुनै शक्तिले पनि ।’
देशमा केही हुन्न भन्नेहरूका लागि ओलिज् आफैँमा एउटा उत्तर हो । लोकेशको हकमा भने उनी देशमा रहलपहल रहेका युवाहरूलाई एप्पलका सामानजस्तै जेनियुन मान्छन् । भन्छन्, ‘‘एक खालका छन्, जो विदेश कामका लागि जाने कुरा सुन्नसम्म चाहन्नन्, देश तिनीहरूको हो । तिनीहरूले यहाँ चाहे जे गर्न सक्छन् ।’’
लोकेश खुसी छन् । कारण दाइ चेतन यसरी दिन्छन्, ‘‘लोकश आफूले चाहेको क्षेत्रमा छ । आफूले चाहेको काम गर्न पाउनुभनेकै खुसी पाउनु रहेछ ।’’
‘‘आफैँले चाहेको ठाउँमा भएसी घाटा हुँदा पनि हाँस्न सजिलै सकिँदो रहेछ ।’’ दाइकै कुरामा जोड्छन् लोकेश ।
ओलिज अहिले नेपालका लागि ब्राण्डेड सामान उपलब्ध गराउने स्टोरका रुपमा परिचित छ । यसले एप्पल लगायत ५० ब्राण्डका सामानहरूको कारोबार गर्छ । सबै उपलब्ध सामानहरूले एप्पलसँग केही न केही रुपमा सम्बन्ध राख्ने कुरामा भने सहमत देखिन्छन् लोकेश ।
एप्पललाई नेपालमा पहिलो पटक अनलाइनमा उपलब्ध गराउने पनि ओलिज् हो । ओलिज् स्टोरबाट नेपालभर एउटै मूल्यमा सामान प्राप्त गर्न सकिन्छ । अझ एयरपोर्टको छेउमा भएकाहरूले त अडर गरेकै दिनमा नै सामान छुन पाउँछन् ।
Tags: एप्पलओलिज् स्टोरबिल गेट्सलाइफ चेन्जिङ
फेरी दुई साता लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रमा गर्न विज्ञको सुझाव, छलफल जारी
२०७७, २० श्रावण मंगलवार १५:१४